XOG: Wasiir Maareeye oo wax looga weydiinayo eedeymaha loo heysto Warbaahinta dowladda (Maxa cusub?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Wasiir Maareeye oo wax looga weydiinayo eedeymaha loo heysto Warbaahinta dowladda...
XOG: Wasiir Maareeye oo wax looga weydiinayo eedeymaha loo heysto Warbaahinta dowladda (Maxa cusub?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa waxaa looga yeeray Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoonka Golaha Shacabka ayaa qoraal uu soo saaray lala wadaagay Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, si uu uga jawaabo su’aalaha ay qabaan kow iyo toban ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka iyo kuwa kale, lana xiriira shaqada Wasaaradda Warfaafinta.
Qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in Wasiir Maareeye laga doonayo in maalinta Axada ee soo socota, taariikhduna ku beegan tahay 15-ka December uu horyimaado Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxay Axadii sheegeen in ay mooshin ka keeni doonaan Warbaahinta Dowladda, oo ay sheegeen in si gaar ahi loogu adeego Madaxda Dowladda oo keliya.
Su’aalo weydiinta Wasiir Maareeye ayaa waxaa la fillayaa in ay u badnaan doonaan kuwo la xiriira shaqada Warbaahinta Qaranka iyo eedeymaha ay u soo jeediyeen Xildhibaanada.
si wax looga waydiiyo eedeymaha warbaahinta dowladda
Wasiir Maareeye oo hortagaya baarlamaanka Somaliya